လှူဒါန်း၊ ပေးကမ်း၊ ကူညီ၊ စွန့် ကြဲ၊ ဝေမျှခြင်း။
To Do Charity for Perfection. Charity makes the heart soft and gentle.
အလုပ်နှင့် အပြောမှာ စည်းကမ်းရှိခြင်း။
To Maintain Bodily Actions and Verbal Actions Properly. Morality serves as the Foundation for the Development of All Meritorious Deeds.
1) Strive to Free Oneself from Pain and Suffering.
2) Strive to Free Oneself from Desire.
အသိဥာဏ်၊ ဗဟုသုတများကို ကြိုးစားရှာဖွေ၊ မှန်ကန်စွာအသုံးချခြင်း။
1) The Knowledge in Arts, Sciences and Philosophy.
2) The Skills in All Theories and Practices for the Welfare of All Beings.
3)Great Wisdom And the Ability to Anlayze Between Cause and Effect.
To Strive Diligently to Accomplish Goals.
သက်ရှိ၊သက်မဲ့များအပေါ် မျှတသောသဘော ထားရှိခြင်း။
1) One Should Neither Be Elated When Meeting with Pleasant Objects/ Situations Nor Be Upset Or Angry When Encountering Unpleasant Objects/ Situations .
2) Patience Can Bring the Most Peaceful Victory.
အပြောမှန်၍ အမှန်ကိုသာ ပြောဆိုခြင်း။
1) To Tell the Truth .
2) To Abstain From Telling Lies Under Any Circumstance.
မနောမှန်၍ အမှန်မနောအတိုင်း ကြံစည်လုပ်ဆောင်ခြင်း။
The Performance of One�s Intended Task with Firm and Unshakable Determination, No Matter What Difficulties and obstructions One Encounters.
ကောင်းကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းအောင်၊ ကူညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
1) To Develop Friendliness, Accommodativeness and Benevolence.
2) To Bring the Well Being and Happiness of Others.
မုန်းချစ်မပြု လျစ်လျူရှုနိုင်အောင် ကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်း။
To MaintainaNeutral Attitude Towards Pleasant and Unpleasant Objects and People Without Bias Towards Either Of Them.
Culture Courses ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းများ
For Children ကလေးများအတွက်
For Adults လူကြီးများအတွက်
Download Class Notes သင်တန်းမှတ်စု
Survey Forms စစ်တမ်းပုံစံ
Dhamma Talks ဓမ္မမှတ်စု
Buddhism and Children ကလေးအတွေးနှင့်အမေး
Current News ပါရမီသတင်း
Media Library ပါရမီရုပ်သံကဏ္ဍ
Volunteer Services စေတနာ့ဝန်ဆောင်မှုများ
Teaching Services သင်ကြားထောက်ကူကုသိုလ်ယူ
Catering Services ဧည့်ခံကျွေးမွေးသန့်ရှင်းရေး
Contact us ဆက်သွယ်ရန်
Teaching Home စာသင်ကြားရေး မူလစာမျက်နှာ
HMS Club Help Myanmar Students
ပြုပြောမှန်၊ ဖြည့်ရန် ပါရမီ"
"အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ
အတွက် စိတ်ထားတူညီ ပါရမီ"
"ကံ၊ ဥာဏ၊် ၀ီရိယ
အသုံးချ၊ မျှတစုံညီ ပါရမီ"
"အဘိက္ကမ-ရှေ့ သို့ တက်လော့
ယုံကြည်ခြင်းတည်းဟူသော သဒ္ဓါတရားလည်း မခိုင်မာသောသူမှာ
လောကီ လောကုတ္တရာပညာ မပြည့်စုံလေ။"
becomes perfect in one
whose mind is not steadfast,
the Good Teaching and
whose faith wavers."
ပါရမီ နည်းသေးလို့ ပါ"
ပါရမီ ရင့်လာလို့ ပါ"
ရလာတဲ့ ပီတိဟာ ပါရမီ"
၁။ ငယ်ခါကလျှင် မသင်ပညာ
၂။ ဥစ္စာ မစု
၃။ သူ့ ကို ချစ်ဖျက်
၄။ သူ့ သက် သတ်စား
၅။ သူ့ မယား၌ ပြစ်မှားတုံဘိ
၆။ ပစ္စည်းရှိလျှက် စိုးစိမလှူ
၇။ မွေးမြူမိဘ မပြုရနှင့်
၈။ ဆုံးမ မနာ
၉။ ပညာရှိထံ နည်းခံမမှတ်
(မာန်လည် ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ မဃဒေ၀ လင်္ကာ-၃၂၁)
ပါရမီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၏ ယုံကြည်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်
ပါရမီ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည် အများကောင်းကျိုးစီးပွားကို ဆောင်ရွက်နေသော တရားဝင် ပရဟိတ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖွဲ့ အစည်းဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ စေတနာရှင် အများစု၏ ပစ္စည်းလေးပါး ထောက်ပံ့မှုဖြင့် ထေရ၀ါဒ ရဟန်းသံဃာတော်များက စီမ၊ံ အုပ်ချုပ်၊ ဦးစီး ဆောင်ရွက် နေပါ သည်။
ပါရမီ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံရည်ရွက်ချက် စည်းမျဉ်း အပိုင်း(၄) (ခ) နှင့်အညီ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုးများ၊ အလုပ်အမှုဆောင်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ လှူဒါန်း ကူညီ ထောက်ပံ့သူများသည် ပါရမီ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၏ အမည်ကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ် ၀ိုက်၍ဖြစ်စေ နိုင်ငံရေးအတွက်သော်၎င်း၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား အတွက်သော်၎င်း၊မည်သည့် အခါမျှ အလွဲသုံးစား လုပ်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ၊၊
ပါရမီ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အမြင့်မြတ်ဆုံး တန်ဘိုးများနှင့် အညီ နေရာဒေသမရွေး ဘာသာရေးနှင့်နိုင်ငံရေး စည်းခြားထားခြင်းကို ရှင်းလင်း၊ ခိုင်မာစွာ ယုံကြည်သည်။ ပါရမီ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၏ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် အောက်ပါ ရည်ရွက်ချက် ငါးမျိုးကိုချမှတ် ထားပါသည်။
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာတော် သန့်ရှင်း၊ တည်တန့်၊ ပြန့်ပွားအောင် ဆောင်ရွက်မည်။
လူသားများ၏ စိတ်ပိုင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတွက် စွမ်းနိုင်သမျှ ကူညီမည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာ များကို အလေးအနက်ထားပြီး ထိန်းသိမ်းမည်။
ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ယဉ်ကျေးမှု လုပ်ငန်းများကို စည်းလုံး ညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်မည်။
ဗြဟ္မစိုရ်တရား ပွားများကျင့်သုံးသော၊ လောကလူ့ဘောင် ပေါ်ထွန်းအောင် ဆောင်ရွက်မည်။
Mission Statement of PARAMI BUDDHA VIHARA
Parami Buddha Vihara isaNon-Profit Buddhist Organization, headed and managed by the Monastic leadership with the supports of devotees. In accord with the Article (iv) (b) of Parami Buddha Vihara, neither Board of Directors, Excecutive Committee Members, Volunteers nor Devotees of Parami Buddha Vihara will get involved in any politics directly or indirectly in the name of Parami Buddha Vihara. In line with the loftiest core values of Theravada Buddhism, we believe in Separation of Church and State anywhere in the world. Our mission to be accomplished lays in the objectives mentioned below:
To promote and propagate Theravada Buddhism.
To give Spiritual and Moral supports to humankind.
To maintain Myanmar Buddhist Culture and Traditions.
To conduct Activities for Cultural and Spiritual Educations.
To uphold Buddhist Heritage and Buddhist Values forahumane society.
Powered by Kutho Seekers Contact Webmaster